Mancehster United , De Gea, Real Madrid, Mata , Diego Coasta, Chiness & Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartooyda – Kooxda.com
Home 2017 April France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta Mancehster United , De Gea, Real Madrid, Mata , Diego Coasta, Chiness & Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartooyda
Mancehster United , De Gea, Real Madrid, Mata , Diego Coasta, Chiness & Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartooyda
April 20, 2017 · by	Jamuuni · 0
Asc, dhamaan aqristiyaasha Shabakada Kooxda.com kusoo dhowaada wararkii ugu muhiimsanaa ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda qaarada Yurub.
Real Madrud ayaa isku diyaarineysa inay u dhaqaaqdo goolhaayaha kooxda Manchestr United David de Gea kaasi oo kooxdiisa laga yaabaa inuu ka fara baxsado xilli ciyaaredka soo socda. waxaana ay ku doonayaa inay kusoo qaataan lacag dhan £60m
Weeraryahanka kooxda Everton Lukaku ayaa saaxibadiisa uu sheegay inuu doonayo ku laabashada garoonka Stamford Bridge ee galbeedka Londo , waxaana xidigaan macquul ah inuu markale u ciyaaro Chelsea.
Kooxaha kala ah Southampton, Everton, West Ham iyo Newcastle dhamaantooda waxaa ay ku dagaalamayaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Swansea Gylfi Sigurdsson kaasi oo lagu qiimeeyey lacag dhan £35m.
Weerarayahanka kooxda Chelsea Diego COast a ayaa bartilmaameeed u nqoday kooxaha ka dhisan Chinese Super League gaar ahaan kooxda Tianjin Quanjian ,waxaana todobaadkii lasiindoonaa £620,000-
Kooxda Tottenham ayaa diyaar u ah inay la dagaalanto Bayern Munich waxaana ay ka doonayaan ciyaaryahankoda muhiimka ah ee Douglas Costa kaasi oo lagu qiimeeyey £30m.
Kooxda Arsenal ayaa ugu yaraan kooxaha Primer League ka dulqaadikarta ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda Southampton Virgil van Dijk, kaasi oo sidoo kale dooneysa kooxda Chelsea.
Macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa damacsan in Mata uu ka diro kooxda waxaana uu doonayaa inuu kooxda kusoo biiriyo xidigo kale.
Filed in: France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta